Kushanda kwesoda metabisulfite sekuwedzera chikafu
Mon-Fri 7:00 AM kusvika 6:00 PM
Sodium Metabisulfite chinhu chinoshandiswa zvakanyanya chikafu chinowedzera. Pamusoro pekuita kwayo kuchenesa, zvakare ine mabasa anotevera:
1) Mhedzisiro yeAnti Browning
Enzymatic Browning inowanzoitika mumichero, mbatatisi, Sodium Metabisulfite inoderedza mumiririri, chiitiko che polyphenol oxidase chine simba rekudzivirira, 00001% yesarufa dioxide inogona kudzikisa 20% yeiyo enzyme chiitiko, 0,001% yesarufa yesarufa inogona kutadzisa zvachose enzyme chiitiko, inogona kudzivirira enzymatic Browning; Uye zvakare, inogona kudya okisijeni mune chikafu chikafu uye kutamba chinzvimbo che deoxygenation. Sulfite mukuwedzera kwekuita neglucose, inodzivirira iyo glucose mune chikafu uye amino acid glycoammonia reaction, saka ine mhedzisiro yekurwisa Browning.
2) Antiseptic mhedzisiro
Sulphurous acid inogona kutamba chinzvimbo cheasidhi inochengetedza, isina kusanganisirwa sulfurous acid inofungidzirwa kuti inodzivisa mbiriso, chakuvhuvhu, mabhakitiriya.Undissociated sulfite inonzi ine simba zvakapetwa ka1000 kupfuura bisulfite mukudzivirira E. coli. mbiriso yedoro uye zvakapetwa ka100 kusimba. Kana sulfur dioxide ine acidic, ine simba rakasimba pakutakura tupukanana.
3, Rinoshanda kusunungura mumiririri
Inogona kushandiswa sezvinhu zveiyo inosunungura mumiririri.
3) Antioxidant mhedzisiro.
Sulfite ine inoshamisa oxidation mhedzisiro Nekuti sulfurous acid yakasimba yekumisikidza mumiririri, inogona kudya iyo oxygen mumichero nemiriwo sangano, inhibit chiitiko che oxidase, iyo oxidation kuparadzwa kwevhitamini C mukudzivirira michero nemiriwo inoshanda kwazvo.
Mechanism yechiito che sodium metabisulfite:
Bleach zvinoenderana nemaitiro ayo ekuita anogona kukamurwa muzvikamu zviviri: Oxidation Bleach uye Kuderedza Bleach.Sodium metabisulfite inogadziridza bhenji mumiriri.
Sodium metabisulfite inogona kusvibiswa nekudzora pigment.Ruvara rwemakemikari akawanda anogadzirwa kubva kumakromaticity mapoka ari mumamolekoro avo.Mavara ebvudzi ane zvisungo zvisina kunyoroveswa, zvichideredza kubudiswa kwebleach maatomu ehydrogen anogona kuita bvudzi rebvudzi rebvudzi riri mune yakasungwa yakasungwa kuita single bond, organic chinhu chinorasikirwa neruvara. Kumwe chikafu Kupenda kunokonzerwa nekuvapo kweion isingawedzerwe, ichiwedzera kudzikisa bleach kunogona kuita ions mairi, kudzivirira chikafu.
Sodium metabisulfite yakasvibiswa nekuwedzera kwe sulfites. Anthocyanin uye shuga zvinogona kusvibiswa nekuwedzera kuita. Izvi zvinogadziriswa, uye sulfurous acid inogona kubviswa nekupisa kana acidification, kuitira kuti anthocyanin ikwanise kugadziriswazve uye yepakutanga iyo tsvuku tsvuku inogona kudzoreredzwa.
Muindasitiri wemabhisikiti, sodium metabisulfite inoshandiswa seyakagadziriswa biscuit bundu. Usati washandiswa, inogadzirirwa mu 20% mhinduro, uye ndokuzowedzerwa mumukaka usina kukura panguva dzakasiyana panguva yekuita kwehupfu. Nekuda kwesarufa dioxide yakaburitswa nesodiyamu pyrosulphate mukugadzirwa kwehupfu, simba uye kuomarara kweupfu gluten yakakura zvishoma, uye shoma yekuwedzera inogona kudzivirira kushandurwa kwezvigadzirwa zvemabhisikiti nekuda kwesimba rakawandisa.Tough bundu inogona kuwedzerwa zvinoenderana nesimba rehupfu, uye kazhinji muchikamu chakakura chemafuta neshuga crisp poda uye inotapira crisp hlama kusvika pazvinokwanisika kusashandisa, izvi imhaka yekuti kuwedzerwa kwemafuta neshuga pachayo kwakadzivirira kuwedzerwa kwemvura yeprotein yemvura, kudzivirira kuumbwa kwenhamba huru yeguten, hapana chikonzero chekuwedzera metabisulfite yesodium.
Pfungwa dzekucherechedzwa mukushandiswa kwesodium metabisulfite:
Aya anotevera pfungwa anofanirwa kucherechedzwa kana uchishandisa sodium metabisulfite mune zvakagadziriswa chikafu:
1) sodium metabisulfite inodzora blekning mumiriri, mhinduro yayo haina kugadzikana uye isina kugadzikana, yave kushandiswa, kudzivirira sulfite kusagadzikana uye volatilization.
2) kana paine ioni yesimbi muchikafu, iyo yakasara sulfite inogona kusanganiswa; Inogona zvakare kuita iyo yakadzora pigment oxidation discoloration, nokudaro ichideredza kushanda kweiyo bleach.Naizvozvo, simbi chelators anoshandiswa zvakare panguva yekugadzira.
3) kushandiswa kwesulfite blekning zvinhu, nekuda kwekutsakatika kwesarufa dioxide uye nyore ruvara, saka kazhinji muzvikafu zvinosara zvakawandisa sulfur dioxide, asi iyo yakasara mari haifanirwe kupfuura muyero
4) Sulfuric acid haigone kutadzisa chiitiko che pectinase, icho chinokanganisa kubatana kwepectin.Kuwedzera, sulfurous acid inopinda mukati memuchero michero, kugadziriswa kwemichero yakaputsika, kuitira kubvisa sarufa yakasviba, saka michero yakachengetedzwa ne sulfurous acid inokodzera chete kugadzira jam, michero yakaomeswa, waini yemichero, michero yakaomeswa, haigone kushandiswa senge mbishi zvigadzirwa zvemakani.
5) Sulfites inogona kuparadza thiamine, saka hazvisi nyore kushandisa mune hove chikafu. 6) Sulfite iri nyore kugadzirisa nemaaldehydes, ketoni, mapuroteni, nezvimwe.
Maitiro uye Kubudirira:
Mundima yemazuva ano yekugadzira chikafu, nekuti chikafu dzimwe nguva chinogadzira risingadiwi vara, kana zvimwe zvekudya mbichana nekuda kwekusiyana, kutakura, nzira dzekuchengetedza, kunhonga nguva yekukura, iro ruvara rwakasiyana, izvo zvinogona kutungamira kune wekupedzisira chigadzirwa ruvara hausi. inoenderana uye inokanganisa mhando yechikafu.Naizvozvo, muzuva ranhasi nekuwedzera kutarisisa kwehunhu hwechikafu, kuvandudzwa kwechikafu chekuchenesa chikafu hakuganhurwe, zvirokwazvo, senge rudzi rwechikafu chekuchenesa chikafu, kukura kwesodium metabisulfite zvakare kwakakura. metabisulfite ine akasiyana siyana mashandiro, kwete chete iro basa rekuchenesa, asiwo basa reiyo oxidation, basa rekudzivirira enzymatic Browning, iro basa reantisepsis, nzira yaro yekugadzira iri nyore uye iri nyore, saka mune nyaya yekuona kuchengetedzwa kwechikafu. , sodium metabisulfite yekuvandudza nzvimbo yakakura kwazvo.
Post nguva: Kukadzi-02-2021
Nharembozha / WhatsApp: +86 13356367799
Natrium Hydrosulfite, Hydrosulfite, Karusiyamu Bromide Solution, Karusiyamu Bromide Anhydrous, Hydrosulfite De Sodium, Karusiyamu Bromide Liquid,